सबैले भनछन्- घूसखोरीले देश बिग्रियाे, तर त्यो घूस दिन्छ कसले ? « News24 : Premium News Channel
सबैले भनछन्- घूसखोरीले देश बिग्रियाे, तर त्यो घूस दिन्छ कसले ?
प्रकाशित मिति : Sep 06, 2018
हामी आफंै नाराबाजी गर्छौं– नेपालमा छन् त दुईवटा मात्र, ती हुन् नारी र पुरष भनेर । तर जो नारा लगाउनुहुन्छ, उहाँकै घरमा गाउँको तल्लो जात भनेर चिनिने कुनै मानिस आएमा भन्ने गर्नुहुन्छ, बाहिर बैठक कोठामा बस् भनेर । मानौं कि ऊसँग छोइयो भने आफू बाँचिदैन होला भनेर । मेरा माननीयज्यूहरु, हरेक कुरा विकास गर्नु छ भने पहिला आफ्नो दिमागी सोचको विकास गर्नुस् अनि देशले आफैं विकासको बाटो पछ्याउनेछ । याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा प्रदीप विवश भण्डारीले लेखेका छन् ।